Cairo, ihe ị ga-ahụ na obodo ebighi ebi | Akụkọ Njem
Cairo, ihe ị ga-ahụ na obodo ebighi ebi
Mariela Carril | | Cairo, Ihe ị ga-ahụ
Ọ bụrụ na enwere obodo na-enweghị atụ n’ụwa, obodo ahụ bụ Cairo. Anwansi, ihe omimi, ọ ka na-ama anyị aka site na ncheta oge ochie ya na ọ bụ ezie na ọ nweghị ezigbo oge ị gara ileta enweghị ụzọ isi wepụ ya na akara aka anyị.
Ahịa, n'okporo ámá, alakụba, Naịl, Pyramid, ụgbọ mmiri na Museumlọ Ngosi Ihe Mgbe Ochie nke Ijipt na-eche anyị n'ihi na ọbụlagodi otu oge na ndụ ị ga-aga Ijipt na ihe ịtụnanya ya. The naghị enwe mmasị na ọnọdụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị ugbu a nke ukwuu na ị nwere obi abụọ? Are nwere akọ, mana echere m na mgbe m gụsịrị edemede m taa, obi abụọ ndị a ga-aghọ agụụ. Lee ihe ịga leta Cairo. Na ihe agaghị echefu.
1 Cairo, ụfọdụ eziokwu iburu n’uche
2 Ihe ịga leta Cairo
Cairo, ụfọdụ eziokwu iburu n’uche
Ọbụna ma ọ bụrụ na anyị enweghị mmasị na obodo, mmadụ enweghị ike ịgafe Egypt na-enweghị ịnọ ụbọchị ole na ole n'isi obodo, ebe ọ bụ ụzọ kachasị mma iji mata ma nweta ndụ ndị Egypt na ọdịiche ya. Ihu igwe dị mma ma nwee obere iru mmiri n'afọ niile, mana n’oge ọkọchị, ọ ga-abụ ihe na-egbu egbu. N'ime ọnwa nke ọnwa July, temometa na-arịgo 36 ºC na nke kacha nta dị gburugburu 21 ºC. Ọ bụrụ na ị nwere ike ịhọrọ mgbe ị ga-aga, ekwesịrị ịme ya na Jenụwarị dịka ọnọdụ okpomọkụ dị n'etiti 21 ºC na 15 ºC. N’ọnwa Machị, Eprel na Juun, ikuku Khamaseen na-efe site n’ọzara wee weta oke okpomọkụ na aja.
Enwere ọtụtụ ụlọ n'obodo ahụ, ihe karịrị ụlọ nkwari akụ 75 nke ụdị dị iche iche na ụfọdụ nwere echiche magburu onwe ya banyere Naịl ma ọ bụ Pyramid. Enwekwara ebe obibi dị ọnụ ala na ụlọ nkwari akụ. Cairo nwere ụgbọ njem ọha na eze nwere bọs, bọs na metro. Enweghị ụkọ tagzi. Akwadoghị ụgbọ ala ebe ọ bụ na edere ihe niile n'asụsụ Arabik ma ọ dị mma. Ekweghi ike ma oburu na ibu nwanyi. Zọ ụgbọ oloko dị mfe iji ma nwee ụgbọ ala dị iche iche maka ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị, mana ọ nweghị obodo ahụ dum. N'ezie, ọ dị ọnụ ala.
Nwere ike ijikọ na tagzi, ụzọ kachasị mma maka njem ma ọ bụrụ na ị bụ onye njem. Enwere atọ tagzi, ndị na-enweghị ikuku ikuku ma ọ bụ igwe na-adọba ụgbọala, (oji na nke ochie), ndị ọcha, nke ọhụrụ na nke ọhụụ na nke nwere igwe eji adọba ụgbọala (ọ bụrụ na ị ga-ahọrọ otu, ka ha bụrụ nke ikpeazụ), ma enwere Ọzọkwa tagzi na-acha odo odo mana ị ga-akpọ ma jụọ ha site na ekwentị.
Ihe ịga leta Cairo
Mgbe ịkwado nleta na ịgagharị Ahụmịhe a bara uru nke ukwuu, yabụ aro m nwere ike ịdị iche na nke ndị njem nleta ndị ọzọ, mana ide ha, echere m njem m, nke nwanne m nwanyị nke jere ije ebe ahụ na ndị ọgọ m. Ahụmahụ atọ dị iche iche n'oge dị iche iche n'afọ, yabụ echere m na ha ga-abụ ezigbo ntụnye ma ha niile zara ajụjụ a: ọ bụrụ na taa ị kpọrọ onye na-enweghị ụkwụ na Cairo, ebee ka ị ga-eburu ha?
Ulo elu ọ ga-abụ ebe mbụ ịse foto site na mma dị mma, nwee ezigbo elele. Ọ bụ ochie mgbidi islam wuru n’elu ugwu Mokkattam ma juu oyi karia obodo. E wuru ihe nchebe ya na narị afọ nke iri na abụọ iji gbochie ndị na-ebuso agha agha na ọ bụ oge ụfọdụ obi gọọmentị. O ji Saladino el Grande ụgwọ ọtụtụ ndozigharị na mmiri miri emi nke 85 mita anyị nwere ike ịghọta taa.
Ka oge na-aga, ndị Ottoman rụrụ ụlọ alakụba ma wuo ụlọ ọhụrụ wee ruo taa nwere ihe ngosi nka ano: Museum Carriage, Ebe Ndebe Ihe Ochie Ndị Ijipt, Ebe Ndebe Ihe Ochie Ndị Ijipt nke ndị Ijipt na Al-Gawhara Palace Museum N’okpuru ụkwụ ya enwere netwọkụ nke okporo ụzọ, okporo ụzọ na alakụba.
Na-ekwu okwu banyere ụlọ ihe mgbe ochie na Ebe ngosi ihe mgbe ochie nke Egypt na Cairo Ọ bụ ebe a na-apụghị izere ezere: ọ nwere nchịkọta kachasị ukwuu nke ihe ochie ndị Ijipt nwere ihe karịrị 120 puku ihe, ọ bụ ezie na ọ bụghị ha niile ka egosiri. Seemslọ ihe ngosi nka ọzọ yiri ya na-ezo na ụlọ nkwakọba ihe ya. Lọ ngosi nka dị na Square Tahrir ma taa ahụhụ na mmebi na izu ohi na nnupụisi 2011. Otu ihere. Lọ ahụ nwere isi ala abụọ nwere papyri na mkpụrụ ego oge ochie nke ọla ọcha, ọla kọpa na ọla edo, ihe akpụrụ akpụ, mbadamba, sarcophagi na ọtụtụ narị ihe si n'ili ndị mmụọ.
Muselọ ihe ngosi nka a na-emepe ụbọchị ọ bụla site na elekere 9 nke ụtụtụ ruo elekere asaa nke mgbede ma na Ramadam ọ na-emechi na 7 pm Admission bụ LE 60 kwa okenye na LE 30 kwa nwata akwụkwọ, mana ị kwụrụ ụma maka ụfọdụ ime ụlọ dị ka Royal Mummies Hall (LE 100) na Centennial Gallery, LE 10. Thelọ ihe ngosi nka dị na Wust el balad agbata obi, etiti, ebe dị mma iji nwee ndụ abalị nke isi obodo Egypt.
Ebe ọzọ dị mma iri nri ụtụtụ ma lelee ọdịda anyanwụ na-ele Pyramid anya bụ Ogige Al Azhar. Ọ bụ nnukwu ogige ma ọ bụ onyinye si Agha Khan nke Anọ na 80s. Ọ ka na-aga n'ihu mana ọ bụ ebe kachasị mma iji nwee ọwụwa anyanwụ. N'aka nke ozo enwere kwa Coptic Cairo, saịtị nke nwere ili Ndị Kraịst na ụka nke na-echetara gị na mberede ịdị adị nke Iso Christianityzọ Kraịst. Dị egwu.
Ọzọ akuku Alakụba Cairo nke gwụchara eweghachi ya n’oge na-adịbeghị anya. Ọ bụ ụdị ụlọ ngosi ihe nka nke Islam. E nwere ụlọ alakụba Ibn Tulun, site na narị afọ nke XNUMX na Gayer-Andernson Museum nke na-arụ ọrụ n'ụlọ onye ahịa Ottoman nke narị afọ nke XNUMX.
Mgbe ọ na-abịa ịzụ ahịa na Ahia Khan el-Khalili Ọ bụ otu n'ime ahịa kachasị mma n'ụwa. Ekpuchiela ya wee laghachi na 1382. Ọ bụ etiti ahịa ahia na ahịa mara mma ebe taa ị nwere ike ịzụta ntakịrị ihe niile, site na mmanụ dị mkpa na jeans. Nwere ike mechaa ije na tii na Fishawi's Cafeteria, otu n'ime ụlọ ahịa kacha ochie n'obodo.
Gagharịa n'akụkụ Osimiri Naịl na a felucca ọ na-atụ aro. Nwere ike ịgbazite ha na ugwu dị n’ihu ụlọ nkwari akụ anọ. N'ezie, n'isi obodo Egypt enwere ọtụtụ ebe ngosi ihe mgbe ochie ndị ọzọ: Museum of Agriculture, the Postal Museum, Railway Museum, Museum Museum, Qasr Al-Eini Medical Museum na ọtụtụ obí eze. Aga m ekwu na nke a dabere na ọdịmma gị, hazie nleta na ụfọdụ ụlọ ngosi ihe mgbe ochie.
M gara Villa nke ndị Fero. Ọ bụ ihe ngosi nka nke dị na mpụga etiti ahụ na-enye gị ohere ịme a oge njem puku afọ atọ gara aga. Na-aga canals njem ụgbọ mmiri motorized na ọ bụ ụdị Ogige ntụrụndụ nke akụkọ ihe mere eme nke na-emegharị ụlọ, obí eze na ụlọ arụsị. Ọ bụrụ na gị na ụmụaka soro gaa, ọ bụ ụzọ kacha mma ị ga-esi mee ka akụkọ a mara ha. Ma n'ezie m gakwara pyramid ahụ, saịtị nke yiri m ihe ruru unyi.
Kedu ndụmọdụ m nwere ike inye gị ka ị mee nke a, la nleta na Cairo? Ọ dị mfe ịga njem na Pyramids nke Giza. Ee, ama m, ị chọghị ya, mana ọ ka mma otu a. Ọ bụrụ na ị ga nke onwe gị, ị ga-akparịrị tagzi na-ebu gị, ha ga-achọkwa ịkwụ gị ihe ọ bụla ha chọrọ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịga naanị gị, ị ga-ewere metro gaa ọdụ Giza wee si ebe ahụ were obere. Ọ dị ọnụ ala, ọbụna.
Echiche nke Pyramid nke Giza bụ akwụkwọ ozi nke oge ochie na nke oge a. Gịnị ka m na-ekwu? Na-eme ọchụchọ na Google maka onyonyo ma ị ga - achọpụta ọtụtụ puku postkaadị dị egwu nke pyramid mana ọ nweghị ihe dịka ịhụ ha ka ha dị ndụ. Otu n'ihi na ha magburu onwe ha mana nke ọzọ n'ihi na n'akụkụ nke na-apụtaghị na foto ahụ enwere agbata obi dum: ụlọ na ụlọ na ọbụna Pizza Hut dị n'ihu Sphinx. I nwere ike ikwere ya? Mbịakọ ọnụ gburugburu ụwa!
Ekwesịrị m ịdọ gị aka ná ntị banyere ịnyịnya kamel: ndị ọkwọ ụgbọala ahụ dị oke egwu, ha ga-enye gị nsogbu site na ajụjụ ma nye gị ọnụahịa dị iche iche dabere na obodo gị. Ha gwakwara gị na amachibidoro ịgagharị na pyramid, ha niile ka ị were ego ịgagharị. Ma enwere ndị na-ere ihe emere na China n'ihe niile.
Enweghị m ahụmịhe ọjọọ na ndị uwe ojii na ndị nche nọ n'ógbè ahụ, mana enweghị ọtụtụ akụkọ banyere ndị njem bụ ndị otu ndị ọrụ a duhiere. Ndụmọdụ m: atụkwasịkwala ha obi, ha niile chọrọ ego. Eziokwu bụ na ọ bụ ebe magburu onwe ya na ụfọdụ ndị ọjọọ, ndị chọrọ inweta ego n'aka gị ma jiri ọnọdụ njem gị. A ụjọ. Ihe a niile ma ọ bụrụ na ịga nke gị. Ọ bụ karịa ma ọ bụ obere ihe mere mụ na nwanne m nwanyị n'ihi na ndị ọgọ m, ndị na-eme njem njegharị, nwere ahụmịhe dị iche.
N'ezie, ọ dịghị onye nwere ike ịhapụ Giza na-enweghị banye na Pyramid Ukwu, gaa na Solar Boat Museum, tụgharịa uche na Sphinx ma ọ bụrụ na i nwere ike, gbaa àmà banyere Ngosipụta ụda na ọkụ. O doro anya, njem zuru oke na Cairo kwesịrị ịgụnye njem na njem, Luxor, Abu Simbel na ụdị ebe ndị ahụ. N'oge ọzọ anyị ga-ekwu maka njem ndị ahụ. Ihe dị mkpa taa bụ ihe anyị nwere ike ime na Cairo ma mara na, ọ bụrụ na anyị bụ ụmụ nwanyị na-alụbeghị di, anyị agaghị enwe oge dị otu ahụ.
Egypt abughi obodo eji nlegharị anyaHa na-ele gị anya nke ukwuu na nke ahụ na-atụ gị ụjọ. Iche na ha chere na n ’ịnọ naanị gị, ị fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akwụna anaghị enyere aka nke ukwuu. Kpachara anya!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Cairo » Cairo, ihe ị ga-ahụ na obodo ebighi ebi
Las Loras, uzo ala mara mma na Spain